သင့် Android Device မှာ Face Unlock ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > သင့် Android Device မှာ Face Unlock ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 7:05 PM Android Tutorial, နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
သင့် Android Device မှာ Face Unlock ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:05 PM Rating:5Apple က iPhone X မှာ Face ID အမည်ရ မျက်နှာအာရုံခံ နည်းပညာကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို စွမ်းရည်ဟာ Android Device များမှာ ရ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:05 PM